ओली र प्रचण्ड‘आसेपासे पुँजी’का नेता हुन् : नेता सीपी मैनाली — Himali Sanchar
रातोपुलस्थित नेकपा मालेको रातो रंगको ‘हेडक्वार्टर’ चकमन्न छ । त्यहाँ कार्यालय सहायकबाहेक अरु मानिस खासै भेटिँदैनन् । न नेताको चहलपहल, न कार्यकर्ताको । सत्तामा नरहेको सानो पार्टीको हेडक्वार्टरमा जागिर माग्नेहरु झन् भेटिने कुरै भएन । अनलाइनखबरकर्मीहरु पुगेको केहीबेरमा पार्टीका महासचिव सीपी मैनाली कार्यालयमा हाजिर भए ।
एउटा जमाना थियो, जतिबेला वाम नेता सीपी मैनाली वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा सिनियर नेता थिए, एउटै पार्टीका ।
अहिले ‘नेकपा माले’ नामको सानो पार्टी चलाएर राजनीतिमा क्रियाशील सीपीसँग अनलाइनखबरकर्मीहरु अरुण बराल र सन्त गाहा मगर दुईवटा विषयमा कुराकानी गर्न रातोपुल पुगेका थिए।
१ – आफ्नै पूर्वकार्यकर्ताले चलाएको वर्तमान सरकारको मूल्यांकन सीपी मैनालीले कसरी गर्दैछन् ? र, आफ्नै पूर्वकार्यकर्ताले हाँकेको नेकपाको जेटलाई मैनालीले कसरी नियालिरहेका छन् ?
२ – विगतमा केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि सिनियर नेताको पहिचान बनाए मैनाली राजनीतिमा किन सफल हुन सकेनन् र पछाडि परे ? अब उनको भावी योजना के छ ? नेकपामा मिसिने या अर्कै विकल्प खोज्ने ?
राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले सीपी मैनालीलाई असफल मान्न सकिएला, तर राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा मात्रै हेर्ने हो भने उनी प्रखर विश्लेषक हुन् । हामीसँगको भेटमा मैनालीले डेढ घण्टासम्म सरकार र नेकपाबारे धाराप्रवाह बताए ।
ओली सरकारले ५ महिनामा गरेका काम र नेकपाको वर्गचरित्रबारे मैनालीले आफूलाई निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत गरे । जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री मैनालीले आफूलाई केपी ओली र प्रचण्डसँग तुलना गरेर अपमानित नगर्न हामीसँग आग्रह गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारबारे तपाईको विश्लेषण के हो ?
यो सरकारको सुरुवात गठबन्धनबाट भएको छ । यसको गठबन्धन नै असैद्धान्तिक रह्यो । किनभने, त्यसबेला एमाले र माओवादी पार्टीसँग धेरै भिन्नता थिए । सबैलाई थाहा छ कि त्यसबेला विवादास्पद रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा थियो, जसलाई संसदमा माओवादी र कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसलाई नेकपा एमालेले राष्ट्रघाती भनेको थियो ।
त्यसबेला संविधान संशोधनको मुद्दामा एमालेको अडान सही थियो कि माओवादीको ?
त्यसबेला हाम्रो नेकपा माले पनि एमालेसँगको गठबन्धनमै थियो । माओवादी र कांग्रेसले अगाडि सारेको त्यो संशोधन संकीर्ण विचारमा आधारित भएर आएको थियो । त्यसले पहिचान र समानताको लडाइँमा नाममा राष्ट्रिय हितलाई पूरा सम्वोधन गर्न सक्दैनथ्यो । निश्चित जातिलाई हेर्ने, समग्र नेपालीलाई नहेर्ने, निश्चित क्षेत्रलाई हेर्ने तर सिंगो नेपाललाई नहेर्ने ।
र, नेपालका विभिन्न कुराहरुलाई देशको भूराजनीतिसँग नजोडिकन अलग्गै हेर्ने । संविधान संशोधनका कतिपय कुराहरु हाम्रो रणनीतिक स्वार्थका विरोधमा थिए । जस्तै- एक मधेस प्रदेशको सेन्टिमेन्टबाट, तराईबाट पहाड हटाउने कुरा आएको थियो । वैवाहिक आधारमा दिइने नागरिकतालाई खुकुलो बनाउन खोजिएको थियो ।
हिन्दीलाई घुमाई फिराईकन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजिएको थियो । यी विषयहरु नेपालको हितमा थिएनन् । त्यसैले एमालेबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध हुनु स्वाभाविकै थियो । यद्यपि एमालेले निकाससहितको विरोध गरेको थिएन । यसको वैकल्पिक समाधान अहिलेको नेकपासँग पनि छैन ।
यसरी तत्कालीन राजनीतिको यो विवादास्पद विषयमा एमाले एकापटि्ट र माओवादी अर्कापटि्ट भएको स्थिति थियो । यो विषयमा एकले अर्कोलाई राष्ट्रघाती दोषारोपण गरिरहेका थिए । यस विषयमा विल्कुलै नबोलिकन भएको एमाले र माओवादीको गठबन्धन नै असैद्धान्तिक थियो ।
तर, त्यसबेलाको मुद्दाले अब नेकपालाई के असर गर्ला ?
अहिले पनि संविधान संशोधनको विषय विस्तारै क्रमिक ढंगले सरकारको अगाडि बुलन्द भएर आउँदैछ । यसमा एकीकृत भइसकेका हिजोका एमाले र माओवादीले कस्तो अडान लिने हुन् ? माओवादी केन्द्रले हिजोको प्रतिष्ठा वा क्रेडिबिलिटी राख्ने हो भने उसले एक ढंगले बोल्नुपर्ने हुन्छ ।
एमालेले सूर्य चिह्नमा जुन ढंगले मत बटुल्यो, त्यसको इज्जत र आदर गर्ने हो भने अर्को ढंगले बोल्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई पहिले नै हल गरेको भए जनताका अगाडि धेरै प्रश्नहरु जीवित रहने थिएनन् ।
तपाई गठबन्धनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर दुई पार्टीवीच एकता नै भइसक्यो नि । माओवादी र एमालेको एकतालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
दुई पार्टीको आडमा आफ्नो शक्ति जोगाउन र दुईवटा मिलेर सत्तामा पुग्नका निम्ति यो एकता भएको हो । यही उद्देश्यले भएको एउटा स्वार्थप्रेरित गठबन्धन हो यो । यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जेठ ३ गते उनीहरुले जुन एकता गरे, त्यो पनि धेरै हिसाबमा स्वार्थप्रेरित देखिन्छ ।
किनभने, अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधनको प्रश्नमा मिलिसकेका दुई पार्टीहरुवीच साझा विचार आइसकेको दुनियाँलाई थाहा छैन । खाली दुईवटा पार्टीले आफ्नो शक्ति जोगाउने र सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले एकता गरेका हुन् । र यही आधारमा फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
सत्तामा पुग्न र शक्ति जोगाइराख्न मात्रै माओवादी र एमालेबीच एकता भएको हो त ?
उनीहरुले घोषणापत्रमा जे-जे भनेका थिए, ती कुरालाई एकातिर पन्छाएर उनीहरु आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्नपटि्ट लागे । चाहे आन्तरिक कुरामा होस्, चाहे जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा होस् वा चाहे वैदेशिक सम्बन्धमा होस्, उनीहरु आफूले प्राप्त गरेको सत्तामा आँच नआओस् भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएर लागे । यसले गर्दा सरकार बनेको ५/६ महिनामै यो सरकारको सुरुवातको लोकप्रियता धेरै नै घटेको छ ।
कतिपयले सरकारको लोकप्रियता ५० प्रतिशत घट्यो भन्छन् । यसको वैज्ञानिक आँकलन त गरिएको छैन, तर पनि लोकप्रियता धेरै घटेको छ ।
सरकारको लोकप्रियता किन घट्यो जस्तो लाग्छ ?
उनीहरुको मुख्य उद्देश्य शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्नु र त्यसलाई जोगाउनु भएको हुनाले उनीहरुले जनभावना र जनताले दिएको मतलाई आदर गरेनन् । जनताका अगाडि विकासका ठूलाठूला कुराहरु गरे । रेल, पानीजहाज जस्ता कुरा जरुरत पनि पर्छन् ।
तर, एउटा मुलुकसँग रहेको निर्भरतालाई घटाएर अर्को मुलुकसँग व्यापार र पारवहनको ढोका खोल्ने कुराहरुमा अहिले सरकारले चीनसँगको प्रोटोकोलमा सही गरिसकेको छैन । यस्ता कुराहरुको चर्चा गर्ने, तर जनताका नाकै अगाडिका कैयौं समस्याहरु काम थाल्ने, वीचैमा छाडिदिने । वा ध्यानै नदिने ।
जस्तै- देशव्यापीरुपमा सडक विस्तारका नाममा तोडफोडका कामहरु भइरहेका छन् । तोडफोड गरिन्छ, तर दुई-तीन महिनामा हुनुपर्ने काम दुई-तीन वर्षमा पनि नहुने ढंगले लथालिंग पारेर छाडिन्छ । यसले जनताको स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर देशको आर्थिक जीवनमा पनि नकारात्मक असर गरेको छ । यस्ता कुरामा काठमाडौंमै पनि कति आन्दोलन भए, सरकारको ध्यान गएन ।
दोस्रो कुरा, यसवीचमा सरकारकै नीतिका कारणले गर्दा महंगी बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको पोलिसी देखिँदैन । विशेष गरी महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढेका छन् । यति ठूलो जनमत लिएर सरकारमा बसिसकेपछि यसको विरोधमा जनअभियान चालेर हुन्छ कि, प्रशासनलाई सक्रिय बनाएर हुन्छ कि ? के गरेर हुन्छ, यी कुरालाई रोक्नुपर्ने हो । प्रत्येक हप्ता काहीँ न काहीँ वालवालिका मारिएका छन् ।
यसवीचमा ठेकेदारले काम गरेनन् भनेर, ठेगान लगाउने भनेर काम सुरु गरियो । त्यो अधुरै रह्यो । ३३ किलो सुन, भ्रष्टाचार र कालोबजारीको कुरा आए । साना माछादेखि लिएर ठूला माछासम्मलाई पछार्ने कुरा गरियो । अहिले यसमा केही भएको छैन । अरु कतिपय मुभहरु, जुन अगाडि बढेनन् ।
जस्तो- शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने भन्ने नारा दिएर चुनाव जितेको हो । तर, अघिल्लो सरकारले जुन चिकित्सासम्बन्धी अध्यादेश अगाडि सारेको थियो, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने बेलामा यो सरकारले सबै राम्रा कुराहरु हटायो । जनताले यो विधेयकको विरोध गरे । यसको अगुवाई डा. गोविन्द केसीले गर्नुभो ।
डा. गोविन्द केसीको अनसन सही थियो त ?
यो सरकारले जुन घोषणापत्रका आधारमा भोट बटुलेको हो, त्योअनुसार जाने हो भने त पहिलो दिनदेखि नै डा. केसीको अनसनलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो । त्यो अनशनलाई त्यतिधेरै बदनाम, दमन र लाञ्छित गर्नैर् नहुने हो ।
त्यो अनसनलाई कमसेकम साढे २६ दिनसम्म यही सरकारको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा लाञ्छना लगाइयो । कर्मचारीले किन हड्ताल गर्‍यो, यस गोविन्द केसीले देशलाई नै गलत दिशामा लगेको छ, यसलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता मन्तव्यहरु सांसद र विधायकहरुले देशव्यापीरुपमा भन्न सुरु गरे ।
खुदै प्रधानमन्त्रीले पनि यो आन्दोलन नदेखेको होइन, यी राताटीके, ठाडा टीके, सेता लुगा लगाउने रंगीबिरंगी कपडा लगाएर हिँड्नेहरुको आन्दोलन हो भनेर लाञ्छित गरेको म आफैंले पनि देखें, सुनें ।
यस ढंगले गोविन्द केसीलाई साढे २६ दिनसम्म पेल्नुपर्ने थिएन । यदि यो सरकार जनताको स्वार्थ, जनमत, राष्ट्रको स्वार्थ र आफ्नो घोषित मान्यतामा अड्थ्यो भने गोविन्द केसीले उठाएको कुरा समाजवादी भावना र नीतिको पक्षमा थियो ।
वाम गठबन्धनले जे आधारमा भोट मागेको थियो, त्यस आधारमै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढाउने र शिक्षा स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने सिद्धान्तअनुसारकै थियो गोविन्द केसीको माग । त्यसैले उनलाई साढे २६ दिनसम्म त्यसरी लतार्नु हुने थिएन ।
तर, पछि त प्रधानमन्त्री ओली पनि डा. केसीको मागमा सकारात्मक नै देखिए नि हैन र ?
देखियो कि स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने एउटा मान्छेले विदेशमा मेडिकल पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थमा बोलेका केही अनुचित कुरालाई एउटा मन्त्रीले हुबहु नक्कल गर्दाखेरि ती मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री पनि डरले थरहरी भए ।
यही पाराले जाने र कथंकदाचित डा. केसीको जीवनमा तलमाथि भयो भने आफूले पनि सत्ताबाट हात धुनुपर्ने देखेपछिमात्रै उनी आन्दोलनकारीले जे भने, त्यसमा सही गर्न तयार भएका हुन् । तर, यति भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने चाटुकारहरु भन्दैछन्- आहा ! प्रधानमन्त्रीको महानता ! उनको प्रजावत्सलता ! उदारता !
साढे २६ दिनसम्म केपी ओलीकै नेतृत्वमा गोविन्द केसीलाई निन्दा गरियो । पछि ओलीले महसुस गरे, त्यो ठीक कुरा हो । सम्झौता गर्नु ठीक कुरा हो । बुद्धि फिरेकोमा म उनलाई धन्यवाद पनि दिन्छु । तर, साढे २६ दिनभरि अहोरात्र विरोध गर्ने मान्छेले सम्झौता गरेपछि यतिधेरै महिमामण्डित गर्नु यो अहंकार हो ।
विगतमा हामीले गल्ती गरेछौं भन्ने मन्तव्य प्रधानमन्त्री र उनका वरिपरि बस्नेहरुबाट आउनुपर्नेमा अनसनको पहिलो दिनमै केपी ओलीले जुस पिलाएर धन्यवाद दिएजस्तो पो गर्छन् गाँठे !
अहिले पनि गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अस्ति भर्खरै गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कार्यान्वयन भएन भने म सोह्रौंपटक अनसन बस्छु भन्नुभएको छ । यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति पनि आइरहेको छ ।
यस्ता कुराहरु धेरै छन् । उनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरु बिर्सिए । जनभावनालाई पनि कदर गर्न सकेनन् । चुनावका बेलामा जेजति राम्रा कुराहरु लेखिएका थिए, भाषण गरिएका थिए, ती निश्चित संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै थिए । त्यो उनीहरुका मान्यता थिएनन् । त्यसैकारण यिनीहरुबाट यतिविघ्न गल्तीहरु भएका हुन् ।
यो सरकारले जुन ढंगको गठबन्धन बनायो, त्यसमा देशभक्तिको जलप छ, तर देशभक्तिको चुरो देख्दिनँ । त्यसमा आफ्नो संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ छ, तर सैद्धान्तिक आधार छैन ।
यसले गर्दा उनीहरु देख्दा वामपन्थीको सरकार, के के न गर्ला भनिएको भए पनि आफ्नो सत्तालाई जोगाउनका निम्ति बाह्य नीतिमा एउटालाई खुशी पार्ने, अर्कोलाई अल्मल्याउने सोचाइमा छन् । देशमा ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर, जनताका नाकै अगाडिका समस्यालाई समाधान नगर्ने । अनि देशमा विभिन्न किसिमका बेथितिलाई अगाडि बढाउने ।
हामी अहिले ओली सरकारको ५ महिने कार्यकालको मूल्यांकन गरिरहेका छौं….
सरकारकै कुरा गर्दाखेरि म दुई/तीनवटा कुराहरु भन्छु ।
यो सरकारले बाबुराम भट्टराईका पालामा तयार भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको जुन निर्देशक विधि थियो, त्यहाँका कार्यकारीलाई नियुक्त गर्दाखेरि योग्यताका आधारमा छनोट गर्ने भन्ने थियो, त्यो विधिलाई समाप्त पार्‍यो ।
त्यसलाई खारेज गरियो । अब आफू वरिपरिका मान्छेहरुलाई सार्वजनिक संस्थानहरुमा भर्ती गर्न सजिलो भयो । यो पनि गर्नै नहुने काम भएको छ । विधिको शासनको वकालत गर्ने हो भने यस्तो काम गर्न हुने थिएन नि ।
तर, यसवीचमा प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गरेर छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारेको अवस्था छ, यसलाई त ५ महिनाको उपलब्धी मान्न सकिन्छ कि ?
भारत र नेपालको सम्बन्ध सुधार्न कोशिस गरियो, यसरी कोशिस गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, हामी के देख्छौं भने यता कोशिस गरिएको छ, तर अन्यत्र गर्नुपर्ने काम छोडिएको छ । जस्तो- ओली चीन जानुभो, व्यापार पारवाहन सन्धिको प्रोटोकोल तयार गर्नुपर्ने थियो, भएन ।
फागुनदेखि नै त्यसमा गृहकार्य गरेर जानुपर्ने र प्रोटोकलमा सही गर्नुपर्ने हो । तर, गृहकार्य नभएकाले सही भएन । पछि चाँडै गर्ने, जुलाइमा गर्ने भनियो । अगस्ट लागिसक्यो, अहिलेसम्म भएको छैन ।
अर्को ठूलो कुरा के छ भने ०७२ सालमा भारत र चीनवीच सहमति हुँदा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर आपसमा व्यापार गर्ने कुरा गरे । हाम्रो भूमि भएर चीन र भारतले व्यापार गर्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो अनुमति छैन । त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री नेपाल आएका थिए । उनले यहाँ आएर भनेका थिए कि नेपालले यस विषयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ भने हामी त्यसमा पुनर्विचार गर्न तयार छौं ।
तर, ०७५ सालमा केपी ओली चीन जानुभो, लिपुलेक दाबी गरिएन । पहिले जाँदा त नाकाबन्दीको बेला थियो, कुरा राखिएन रे ल । तर, अहिले त कुरा राख्न ढीलो भइसकेको छ नि । तर, हामीले लिपुलेकलाई दाबी नै गरेनौं । त्यो लिपुलेक भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय विन्दु हुँदै होइन, हाम्रो नेपालको भूमि हो ।
अहिले पनि दक्षिणको छिमेकीले हामीलाई हेपिरहेको छ । टाइम-कुटाइममा उसले हाम्रो कृषि उपार्जनलाई उसले रोकिरहेको छ । सीमाना मिचिन्छ । सीमास्तम्भ भत्काइन्छ । हाम्रो सीमानामा बाँध बाँधिन्छ र नेपालमा डुबान पारिन्छ । यसको रोकथाममा सरकारको कुनै पहल छैन ।
यसको कारण के हो भने यो सरकार सिद्धान्तहीन ढंगले, राजनीतिहीन ढंगले दुईटा दलको शक्ति जोगाउन र दुईवटा दल मिलेर सत्तामा पुग्ने र रजगज गर्ने स्वार्थले नै मूलतः बन्नु हो । यो सरकारले सिद्धान्तको जलपमात्रै दलेको हुनाले यस्तो भएको हो । यो सरकार जनताको हितमा लक्षित भएर बनेको हुन्थ्यो भने बोलीमा एकथोक र काममा अर्कोथोक हुने थिएन ।
तपाईको विचारमा प्रधानमन्त्रीले छिमेकीसित लिपुलेकबारे कुरा नराख्नुका पछाडिको कारण के होला ?
अहिलेको सरकारको सत्तास्वार्थले गर्दाखेरि कोही शक्ति रिसाउला कि भनेर यो कुरालाई अगाडि सारिएन । किनभने, भारत र चीनको सम्बन्धमा पनि एउटालाई खुशी पार्ने र अर्कोलाई अल्मल्याइरहने यो सरकारको नीति छ । दक्षिणलाई खुशी पार्ने र उत्तरलाई अल्मल्याउने । इङ्गेजमात्रै गर्ने ।
जस्तो- दक्षिणका सम्बन्धहरु बाह्यरुपमा सुधि्रएको देखिए पनि मूल कुराहरु टुंगिएका छैनन् । पहिचान संविधानमा लेखियो, लागू भएको छैन । जनसंख्या र भूगोलको प्रतिनिधित्व संसदमा सही किसिमले गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यी कुराहरु त बाँकी नै छन् ।
हो, संकीर्ण ढंगले आएको एक मधेस एक प्रदेशको विरोध गरिनुपर्थ्यो । नागरिकता नीति, तराईको मात्र प्रदेश भन्ने कुराको विरोध गरिनुपथ्र्यो । तर, यसो गरे पनि पहिचान, समावेशितालाई संविधानले संस्थागत गर्नुपर्ने हो । जनसंख्या र भूगोलको अनुपात मिलाएर प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यो त गरिएको छैन ।
घरेलु राजनीतिकै कुरा गर्दा ओली सरकारले पहिचानको मागलाई सम्वोधन गरेन भन्ने तपाईको आशय हो ?
केपी ओलीले पहिचान, समानता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई वैकल्पिक ढंगले सम्वोधन गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगरिकन सरकारले जुन ढंगले काम गर्‍यो, यसले वास्तविकरुपमा जनजाति र मधेसीहरुले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरु दबिएका छन् । जनसंख्या र भूगोलको प्रतिनिधित्वको समानुपातिकता दबिएको छ । यसले गर्दा ‘बाहिर-बाहिर थाकी जा, भित्रभित्र पाकी जा’ को स्थिति छ । भित्रभित्रै असन्तुष्टिहरु बढिरहेका छन् ।
बाहिर-बाहिर दुई तिहाईको बलमा त्यसलाई थामथाम थुमथुम गरिँदैछ । तर, यो एक दिन बिस्फोटक भएर आउन सक्छ । त्यसबेला यस्तो स्थिति हुन सक्छ कि त्यसलाई राजनीतिक पार्टी, प्रशासन र देशले नै सम्वोधन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेला मधेस स्वतन्त्र देश देऊ भन्ने ढंगले कुरा अगाडि बढेको खण्डमा एक मधेस एक प्रदेश दिनु ठीकै छ भनेर यही नेतृत्वले दोब्रिएर घुँडा टेक्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
हिजो केपी ओलीले नै समावेशीपनलाई सिध्याए । समावेशीपन भनेको खाली राजनीतिमा महिला, दलित, जनजाति, पछौटे समुदायलाई ल्याउने मात्रै होइन, देशमा रहेका भिन्न विचार बोक्ने साना पार्टीलाई पनि नमार्ने हो । तर, हिजो सिर्फ केपी ओलीकै पहलमा जुन कानून बनाइयो, त्यसबाट दलहरुलाई नियोजन गर्नका लागि ठूलो थ्रेसहोल्ड राखियो । यसले समावेशीताको पद्दतीलाई नै हँसीको पात्र बनाएको छ ।
यसवीचमा केही नक्कली अभियानहरु चलाइयो, सुनको विषयमा । ठेकेदारहरुको विषयमा । यातायातको सिन्डिकेटको विरोधमा । यी सबै अधुरै छाडेर गइयो । गोविन्द केसीको विरोधमा साढे २६ दिन लाग्ने काम गरियो । केही घण्टामा लत्याकलुतुक माने पनि त्यसलाई लागू गरिएको छैन । यी सारा कुरा जे भएका छन्, उनीहरु गलत भएकाले नै यस्तो भएका हुन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिले आएको बजेट हिजो कांग्रेसले ल्याएको उदार पुँजीवादी सिद्धान्तमा आधारित बजेटभन्दा के पो फरक छ र ? अहिले यो बजेटले शिक्षामा लगानी कटौती गरेको छ । स्वास्थ्यमा कटौती गरेको छ । कृषिमा बजेट कटौती गरेको छ । समस्या के छ भने उनीहरु जे होइनन्, त्यो हौं भन्न चाहन्छन्, जे हुन् त्यो भन्ने यिनीहरुलाई आँट छैन । र, उनीहरु तेस्रो नहुने चिज गरिरहेका छन् ।
अहिले संघीयताका नाममा स्थानीय सरकार र प्रदेशहरुले जनतालाई करहरु बढाइरहेका छन् । यसले संघीयताको विरोधमा जनताको भावनालाई भड्काउने बाहेक केही पनि गर्दैन ।
यसचोटि बजेट बनाउँदाखेरि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्रीहरुको र नेकपा मालेलगायतका पार्टीहरुको के कुरा थियो भने यसपालिदेखि यो सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भनेर सांसद/विधायकलाई पैसा नदेओस् । यसले सांसद र विधायकहरु राजनीतिकर्मी हैनन्, विकासका ठेकेदार हुन् भन्ने गलत सन्देश दियो ।
सरकारले सांसदहरुलाई नीति निर्माता होइन, ठेकेदार बनाउने काम गर्‍यो । यो सरकार साँच्चै नै सैद्धान्तिक थियो र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध थियो भने उसले यस्तो काम गर्ने हो ? त्यत्रो विरोध भएको थियो । तर, आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि सांसदहरु र विधायकहरु नरिसाउन् भनेर उनीहरुलाई खर्च गर्ने व्यवस्था गरियो ।
अर्को कुरा, असारे विकास । प्रत्येक वर्ष जेठ-असारमा यसको विरोध हुँदै आएको छ । यसचोटि वामपन्थी नामको दुई तिहाईको सरकार आयो, यसले त रोक्छ होला भनेको, रोकिएन । यसमा सरकारलाई केले रोक्यो ?
यो असार बजेटको ठूलो हिस्सा गोजीमा जान्छ । जुन पैसा काममा लगाइन्छ, त्यो पनि कमजोर हुन्छ र ५/६ महिनामा नै छताछुल्ल हुन्छ । यस्तो असारे विकासलाई रोक्न यो सरकारलाई केले बाटो छेकेको थियो ? गर्न सक्थ्यो नि । जनताका भावनालाई हृदयमा राखेर यो गठबन्धन सरकार बनेको भए त कुनै पनि हालतमा ऊ पछि पर्ने थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिमा सोचेजति काम गर्न सकेनन् होला । तर, उनको नियतमाथि नै त प्रश्न उठाउन मिल्दैन होला नि ?
यहाँ मैले जेमा आलोचना गरें, ती कामहरु प्रधानमन्त्रीले नगर्नुपथ्र्यो । जे कुरा घोषणापत्रमा लेखिएका थिए, ती कुराहरु गर्नुपथ्र्यो । तर, किन यस्तो भएको छ त ? हामीले त्यो हेर्नुपर्छ ।
किन ? प्रधानमन्त्रीको नियतमै खोट भएर हो त ?
उहाँहरुले जुन ढंगले जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरुले विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन अगाडि सार्नुभएको छ । त्यसलाई अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने उनीहरु नरमरुपमा भन्ने हो भने धेरै अल्मलिएका छन् । अलि कडै ढंगले भन्ने हो गलत दिशामा छन् ।
नेकपा कसरी गलत दिशामा छ ?
उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सामन्तवाद सिद्धियो । पुँजीवाद आइसक्यो । तर, यति भनिसकेर फेरि के भन्नुहुन्छ भने पुँजीवाद आइसक्यो, तर अझै पुँजीवाद बनाउने । पुँजीवाद आइसकेको हो भने त अब समाजवादमा जानुपर्ने हो । तर, उहाँहरु भन्नुहुन्छ, राजतन्त्र गएको हुनाले सामन्तवाद सिद्धियो, पुँजीवाद आइसक्यो, तर अहिले समाजवादको निम्ति क्रान्ति गर्ने होइन, अहिले पनि सामन्तवादसँग लड्ने र राष्ट्रिउ पुँजीवादको निर्माण गर्ने ।
अहिले समाजवादको निम्ति लड्ने होइन भन्ने उहाँहरुको मान्यता छ । वास्तवमा उहाँहरु कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ ।
जनवाद भनेको मजदुर किसानको गणतन्त्र हो । त्यो नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको पुँजीवादी क्रान्ति नै हो । तर, त्यो समाजवादोन्मूख हुन्छ । त्यसले समाजवादमा जाने बाटो खोल्छ भनेर पुष्पलालले पनि भन्नुभएको छ । तर, अहिले नेकपाका नेताहरुले जनतालाई अल्मल्याउन खोजिरहेका छन् ।
किनभने, नयाँ जनवाद भन्नु नै सामन्तवाद साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्ति हो । हामीले ००६ सालदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो यो । अहिले उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने नयाँ जनवाद भैसक्यो । यसले गर्दा डकुमेन्टमै उहाँहरुको गलत विश्लेषण छ । के राजतन्त्रमात्रै सामन्तवाद हो र ? राजतन्त्र भनेको त सामन्तवादको उपरी संरचनामात्रै हो ।
यो सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ । त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने ७५ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको आय उपभोगमा खर्च हुन्छ, पुनरुत्पादनमा जाँदैन । उत्पादन गर, उपभोगमा खर्च गर, यो सामन्ती ढाँचा हो । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा चाहिँ यही सामन्ती नै छ ।
अहिले पनि नेपालमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी साना किसानहरु छन् । सबैलाई थाहा छ कि हामी ९४ प्रतिशत भन्दा बढी आयात गर्छौं र ६ प्रतिशत भन्दा कम निर्यात गर्छौं । हाम्रा उद्योग धन्दाहरु खत्तम भइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी छैन । यो स्थितिमा उहाँहरुले देशमा सामन्तवाद सिद्धियो, पुँजीवाद आयो भन्नुभएको छ । यो आफैंमा गलत तर्क छ । उहाँहरुले कार्यकर्तालाई झुक्याउने र गलत दिशामा लाने काम गरिरहनुभएको छ ।
अर्कोतिर उहाँहरुले के भन्नुभएको छ भने नेपालजस्तो अहिले जुन राज्य छ, जुन शक्ति सन्तुलन छ, यो स्थितिमा हामी शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादको निर्माण गर्न सक्छौं । उनीहरु यस्तो भ्रमपूर्ण मान्यता राख्छन् ।
उनीहरु भ्रममा रुमल्लिएका छन् । तर, उनीहरुको मुख्य डाइरेक्सन भनेको दक्षिणपन्थी पुँजीवादी छ । आफ्नो प्रतिवेदनको एउटा अध्यायमा उनीहरु ठिकै कुरा लेख्छन्, अर्को अध्यायमा गलत कुरा लेख्छन् ।
राजनीतिक-वैचारिक हिसाबले त नेकपा वामपन्थी शक्ति नै हो नि, हैन र ?
निचोडमा उनीहरुको लाइन भनेको देशमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने किसिमको रहेको छ । उनीहरुको ‘ड्राइभ’ चाहिँ त्यतापटि्ट छ ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद मार्क्सवादी मान्यता होइन । मार्क्सवादी समाजवाद भनेको त कालान्तरमा गएर उत्पादनका साधनहरुमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वलाई सिध्याएर सार्वजनिक/सामुहिक स्वामित्व स्थापना गर्ने किसिमको हो । यसलाई नै सर्वहारा समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद भनेर बुझिन्छ ।
रुसको अक्टोबर क्रान्तिपश्चात् समाजवादी लहर विश्वमा बढ्दै गएपछि पुँजीवादी राजनीतिज्ञहरुले ‘पुँजीवादी समाजवाद’ को धारणा अगाडि सारे । उत्पादनका साधनहरु व्यक्तिका हातमा राख्दाराख्दै पनि उत्पादनमा बढी प्रगतिशील कर लगाएर त्यसलाई जनताका सुख सुविधामा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भत्तामा, बाटोघाटोमा खर्च गर्ने र जनतालाई केही सुविधाहरु दिने । तर, पुँजीवादलाई बचाउने सिद्धान्त भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । अथवा यो एक किसिमको बुर्जुवा समाजवाद हो । अथवा त्यो पुँजीवादी समाजवाद हो ।
अहिले नेकपाका नेताहरुले जनतालाई झुक्याउन गोलमटोल कुरा गरेका छन् । गाँजेमाझे कुरा गरेका छन् , तर उनीहरुको निचोडचाहिँ शान्तिपूर्ण ढंगले नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने छ । वर्तमान संविधानले दिने त्यो समाजवाद भनेको बढीमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो ।
तपाईले नेकपालाई कांग्रेसजस्तै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ शक्ति मात्र हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेपाली कांग्रेस जस्तो गैरकम्युनिष्टले प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारणा राखेर केही राम्रा काम गर्छन् भने मार्क्सवादीहरुले ती राम्रा कुरालाई सपोर्ट गर्न सक्छन् । तर, प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै कम्युनिस्टहरुको सिद्धान्त हुन सक्दैन ।
किनभने, यो साँचो अर्थको समाजवाद, जनताको समाजवाद, सर्वहारा समाजवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद होइन । यो मार्क्सवादी समाजवादलाई रोक्नका लागि आएको सिद्धान्त भएकाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त हुन सक्दैन ।
उसोभए नेकपा र उसको नेतृत्वमा बनेको सरकार कम्युनिष्ट समाजवादी होइन ?
यिनीहरुको ‘डाइरेक्सन’ प्रजातान्त्रिक समाजवादतिर छ । तर, त्यो पनि किताबमा मात्रै छ । व्यवहारमा त त्यो पनि छैन । प्रजातान्त्रिक समाजवादले पनि डा. गोविन्द केसीले भनेजस्तो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा राज्यको बढी भूमिका खोज्छ । तर, नेकपाका नेताहरुसँग त यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि मुखमा मात्रै छ । व्यवहारमा चाहिँ यिनीहरुसँग यही उदार पुँजीवाद नै छ । यही लुटेरा पुँजीवाद नै उनीहरुको व्यवहारमा छ ।
अहिले डेमोक्रेसी क्षत-विक्षत भएको छ । जनतन्त्र धनतन्त्रमा परिणत भएको छ । गुण्डातन्त्रमा परिणत भएको छ । दलाल र आसेपासे पुँजीपतिहरुको सहयोगमा नहुनेले एउटा वडामा पनि चुनाव लड्न सक्दैन । केपी ओली कम्युनिस्ट हुन् भने राजनीतिमा यो जुन विकृति घुसेको छ, यसलाई सिध्याउन् र राजनीतिलाई विकृतिमुक्त बनाउन् ।
तपाईको विश्लेषणमा केपी ओली वामपन्थी, कम्युनिस्ट अनि प्रजातान्त्रिक समाजवादीसम्म पनि नभएर ‘लुटेरा पुँजीवादी’ हुन् ?
वास्तवमा अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि यसले बाह्य आयातलाई कम गर्ने र निर्यात बढाउने कुनै कार्यक्रम अघि सारेको देखिँदैन । यसरी आयात गर्ने जो व्यापारीहरु छन्, तिनैलाई खुशी पार्नका लागि यो सरकारले काम गर्छ । यो सरकारले दलाल पुँजीवादलाई नै संरक्षण गरिरहेको छ । त्यतिमात्रै नभएर अहिले नयाँ शब्द आएको छ- क्रोनी क्यापिटालिजम अर्थात आसेपासे पुँजीवाद ।
हिजो कर्मचारीहरुले प्रश्रय दिने नोकरशाही पुँजीबाट शोषण हुन्थ्यो । अहिले त्यो किसिमको पुँजी नै सिद्धिएको हुनाले घटेको छ । अहिले के आएको छ भने राजनीतिक नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षण हुने किसिमका कानूनहरु बनाइदिने र ती कानूनहरु लागू गरेर नेताहरुले पुँजी कमाउने ।
यसलाई भनिन्छ, आसेपासे पुँजीवाद । यसलाई भनिन्छ क्रोनी क्यापिलिजम । यो सरकार आसेपासे पुँजीको नेता हो । र, क्रोनी पुँजीको नेता हो ।
के आधारमा यो सरकारलाई ‘आसेपासे पुँजीपतिको नेता’ भन्न मिल्ला ?
अहिले जसरी शिक्षामा, स्वास्थ्यमा स्वार्थसमूहहरु छन्, बाटोघाटो आदिमा कन्ट्राक्टरहरु छन्, यी सबैको अनुकूल हुनका निम्ति केपी ओली साढे २६ दिनसम्म उनीहरुकै फाइदाका निम्ति लडिरहे । तर, अन्तिममा क्रोनीहरुका निम्ति लड्न खोज्दा आफ्नै गद्दी भत्किने डर देखेपछि उनले हतार-हतार सम्झौता गरे ।
अन्तिम दमसम्म केपी ओलीको लडाइँ कसका निम्ति थियो ? क्रोनी क्यापिटालिस्टहरुको । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर अकूत कमाउन खोजिराखेका थिए, उनीहरुकै पक्षमा लागेर केपी ओलीले गोविन्द केसीको विरुद्धमा लडे । अन्तिम बेलामा आफ्नो सत्ता नै सिद्धिने भएपछि मात्रै उनले सम्झौता गरेका हुन् । यसले गर्दा यिनीहरु क्रोनी क्यापिटालिस्टहरु नै हुन् ।
जस्तो- म तपाईलाई भन्छु, यो सरकारले बजेटमा एउटा नयाँ चुरे राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग भनेर ल्याएको छ ।
यसका विषयमा कुनै सर्वेक्षण भएको छैन, तर यसलाई बजेटमा राखिएको छ । यो किन राखियो ? जबकि हामीसँग हुलाकी राजमार्ग छ, त्यो अझै बनेको छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चौडा बनाउन बाँकी छ । पूर्व-पश्चिम मेट्रो रेल चलाउने कुरा छ । पहाडी लोकमार्ग पनि बनिरहेको छ ।
अब हिमाली लोकमार्ग बनाउन सकिएला । तर, फेरि चुरेमै अर्को मदन भण्डारी मार्गका नाममा बाटो किन खन्नुपर्‍यो ? यो अरु केही होइन, चुरे क्षेत्रको वन विनास गर्ने जुन दलालहरु छन्, त्यहाँका रोडागिटी भारतमा विक्री गर्ने जो कन्ट्राक्टरहरु छन्, तिनीहरुबाट कमिसन खाने नियत हो यो ।
अहिले जुन राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम छ, त्यो व्यवस्थित भएर लागू भएको छैन । यो स्थितिमा अहिले जुन ढंगले चुरेको विनास भइरहेको छ, त्यहाँ सरकारले राजमार्ग खोल्ने भन्नुको अर्थ त चुरेमा जंगल काट्न दिने हो ।
चुरेको गेगर, बगरलाई बिक्री गर्न दिनु हो । जग्गा दलाल र ढुंगागिटी बेच्नेहरुबाट कमिसन लिएर हाम्रो चुरे विनास गर्नुर् र मधेसलाई सखाप पार्नु हो । मधेसलाई मरुभूमि बनाउनु हो ।
तर, के यति कुरा केपी ओलीलाई थाहा छैन होला त ?
मैले अघि नै भनें कि केपी ओलीले झुक्याएर समाजवादको कुरा गरे पनि यसमा उनी प्रतिवद्ध छैनन् । उनी कम्युनिष्ट नभएर प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुन् भने प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुँ भन्नु परो । मार्क्सवादको झण्डा, हँसिया हथौडाको झण्डा छाडिदिनोस् र ठीक छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादी बन्नोस् ।
कांग्रेस भन्दा लेफ्ट समाजवादी हुने हो भने त्यसले पनि गरी खान्छ । त्यसले पनि बहुमत ल्याउन सक्छ । तर, तपाई किन मार्क्सवाद र कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गरेर लालझण्डा हल्लाउने अनि लाल झण्डाकै विरोधमा काम गर्नुहुन्छ ? तपाई डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट हो भने यो रातो लबेदा खोलेर जे लबेदा हो, त्यो लगाएर काम गर्नोस्, अनि इमान्दारिता ठहरिन्छ ।
यिनीहरु प्रजातान्त्रिक समाजवादमा जाने लक्षण देखाउँछन्, तर त्यो पनि झुक्याउनेमात्रै हो, त्यो पनि लागू गर्दैनन् । उनीहरुले जे गरिरहेका छन्, वास्तवमा दलाल पुँजीलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । उनीहरुले क्रोनी पुँजीलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । दलाल र क्रोनी पुँजीलाई बढाइरहेका छन् । जतिसुकै देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाभलम्वी बनाउने कुरा गरे पनि यी खाली बिकाऊ नारामात्रै हुन् ।
निचोडमा भन्दा यो सरकारको असली वर्ग-चरित्र के हो ?
यो सरकार सबैभन्दा पहिले उनीहरुको सक्कली, साँचो रंगमा आउनुपरो । उनीहरु कम्युनिस्ट हुन् भने भन्नुपरो कि राजतन्त्र गए पनि सामन्तवाद सिद्धिएको छैन । दलाल पुँजी र क्रोनी पुँजीलाई रोक्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय पुँजी बढाउनुपर्‍यो ।
कृषि, पर्यटन र अरु विविध सेवाको क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गरेर जनपुँजीलाई बढाउनुपर्‍यो । राष्ट्रिय पुँजी र जनपुँजीलाई मिलाएर म यसलाई सोसल पुँजी भन्छु । अहिले सामाजिक पुँजीको निर्माण गर्ने बेला हो । यसका लागि आयातलाई निरुत्साहित गरौं र उत्पादनलाई बढाऔं । राष्ट्रिय उद्यमहरु खोलौं । पूर्वाधारमा लगानी गरौं । ऊर्जाको विकास गरौं । यसप्रकारले देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध पार्न सकिन्छ ।
यसो गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले उनीहरु कम्युनिस्ट हुन् भने भन्नुपर्‍यो- दलाल पुँजी र आसोपासे पुँजीको विरोध गर्छौं, विदेशी हस्तक्षेप र दबावको विरोध गर्छौं । यो भन्नुपर्ने हो उनीहरुले । र, यसका लागि तात्कालिक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक कार्यक्रम बनाऔं । राजनीतिमा पहिचान दिने, संविधानमा लेखिएअनुसार समावेशीता लागू गर्ने । निर्वाचनमा जनसंख्या र भूगोलको अनुपात मिलाउने । यी कामहरु गरौं ।
यिनीहरु पुँजीवादी बाटोमा अगाडि जान चाहन्छन् । तर, त्यो भन्ने आँट छैन । त्यो आँट भएको भए उनीहरुले आफूलाई नेकपा नभनेर समाजवादी वा वामपन्थीसम्म भनेर जाने थिए होला । देशभक्त समाजवादी पार्टी भन्न सक्थे होला । तर, उनीहरु धेरै नक्कली मान्छेहरु हुन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टप्रति जनताको आकर्षण छ भनेर त्यो नारा, झण्डा र शब्दहरु पनि नछाड्ने, तर आफूलाई पुँजीवादी पनि भन्न नसक्ने । त्यसैले उनीहरु अहिले मार्क्सवादी बाटोबाट च्यूत भइसकेका छन् । उनीहरुले गर्न खोजेको पुँजीवादी समाजवाद हो, त्यो गर्ने पनि आँट छैन । अहिले उनीहरु जे गरिरहेका छन्, त्यो उदार पुँजीवादकै बाटो हो ।
यिनीहरु कम्युनिष्ट मार्क्सवादी होइनन्, तर त्यो भन्न छोड्दैनन् । यिनीहरुले गर्न खोजेको पुँजीवादी समाजवाद हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो गर्न यिनीहरुमा ह्याउ छैन । त्यसैले यिनीहरुले जे गर्छन्, त्यो परम्परावादी हुन्छ । यही कारणले यिनीहरु डा. गोविन्द केसीसँग साढे २६ दिनसम्म लडे ।
तर, अहिले उनीहरुले फेरि आफ्नै खुट्टो माथि राखेका छन् । यो त दुई पहलमानको लडाइँमा तल परेको धमण्डीले मेरो खुट्टो त ठाडै छ नि भनेजस्तै हो । कुस्तीमा हार्ने, तर खुट्टो ठाडो पारेर विजय घोषणा गर्नेखालका हुन् यिनीहरु ।
कांग्रेसले ओलीमाथि अधिनायकवादको आरोप लगाइरहेको छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
एक किसिमको निरंकुश र अहंकारी प्रवृत्ति बढेको छ । केपी ओली हिजैदेखि निरंकुश हुन् । भरसक दुई दलीय, नभए पनि तीन दलीय तानाशाही ल्याउने मान्यताले केपी ओलीले काम गरेका हुन् ।
हिजो ऐन बनाउनेदेखि नै कांग्रेसभन्दा पनि जहरिलो ढंगले केपी ओली नै लागेका हुन् थ्रेसहोल्ड लगाउन । केपी ओलीले त्यहीँदेखि दलहरुलाई नियोजित गर्ने काम सुरु गरेका हुन्, आज पनि उनले नियोजित गरिरहेका छन् ।
हुन त जनतामा के फैलाए भने साना दलहरुले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । तर, यो झूठो हो । ठूला दलले साना दलका बिकाऊ नेतालाई किन्न पैसा खर्च नगरेको भए, विदेशबाट पैसा ल्याई-ल्याई उनीहरुले नकिनेको भए बजार भाऊ बढ्थ्यो र ? त्यसो गर्ने सबै ठूला दलहरु हुन् । तर, आरोप साना दलमाथि लगाइयो । त्यसैले अहिले जसरी यिनीहरुमा दम्भ आयो ।
त्यसैले अहिले उनीहरुमा जुन अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखियो भनिँदैछ, यो विल्कुल निराधार होइन ।
यिनीहरुले जसरी विरोध प्रदर्शन गर्ने माइतीघर लगायतका ठाउँलाई निशेधित क्षेत्र घोषणा गरे, किन गर्नुपर्‍यो ? त्यस्तो केही भएकै थिएन । आकाश सफा भएकै बेलामा बिस्कुन उठाएजस्तो गर्ने काम गरे । किन निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्थ्यो ? उनको मनसाय नै कालो भएका कारणले ।
अर्को- सर्वोच्चका न्यायाधीशको कुरा । ठीक छ, संविधानले सुनवाईको व्यवस्था गरेको छ । सुनुवाईले संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई रोक्न सक्छ । तर, दोषहरु प्रमाणित नभइकन उनीहरुले रोके, यो त ठीक भएन नि ।
तर, एमालेसँग मिसिएको माओवादीले नेकपाको रंगलाई केही रातो बनाउन सक्छ कि ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
माओवादीले जति चर्को कुरा गरे पनि उनीहरुको लक्ष उग्रवामपन्थी थियो । उनीहरुले विस्तारै भारतको शरण लिए । सशस्त्र संघर्ष गरेको एक डेढ वर्षपछि उनीहरुले निर्णय नै गरेर आफ्नो अड्डा भारतमा सारे । इण्डियाले त्यही हेरिरहेको थियो ।
भारतले हिजो वीपीलाई बंगलादेशका शेख मुजिबुर रहमानजस्तै बनाउन खोजेको थियो, वीपीले मानेनन् । ०४६ सालमा उनीहरुले हामीलाई राजाको विरोधमा बन्दूक बोके जम्मैथोक सहयोग गर्छौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए, हामीले मानेनौं ।
त्यसपछि उनीहरु दुःखी भएर पात्र खोज्दै थिए कि कुनै दिन त्यस्तो दुस्साहसी मूर्ख आउला र त्यसलाई प्रयोग गरौंला । प्रचण्डले सशस्त्र संघर्ष गर्न थालेपछि अब केटाहरु आउँछन् भनेर उनीहरुले सोचे । त्यसपछि माओवादीले इण्डियामै अड्डा जमाएर उनीहरुकै आड भरोसामा कथित क्रान्ति गर्‍यो ।
त्यसैले केपी ओली र प्रचण्ड दुईटै उस्तै हुन् । न त केपी ओली आफ्नो वर्गीय अडान छाडेको गल्तीबाट मुक्त भएका छन्, न त प्रचण्डहरु साम्राज्यवादी-विस्तारवादीको सहयोगमा क्रान्ति गर्ने भ्रमबाट नै मुक्त भएका छन् । यी दुईवटै आ-आफ्नो भ्रम पालेर महाभ्रम बनाउनका लागि एकीकृत बनेका हुन् ।
अहिले तपाई देख्नुहुन्छ, यिनीहरुसँग साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादसँग कुनै होसियारी छैन । देशमा सबै समस्या समाधान भयो, अब आर्थिक समृद्धि मात्रै गर्ने हो भनेर उनीहरुले गाँजा खुवाउन खोजिरहेका छन् । जबकि अहिले पनि पहिचान छैन, समानता छैन, समावेशीकरण छैन । यत्रा राजनीतिक समस्याहरु बाँकी छन् ।
हाम्रो स्वतन्त्रता अहिले पनि खतरामा छ । बाबुराम प्रचण्डदेखि केपी ओलीसम्म सबै भन्छन्, राजनीतिक समस्या सिद्धिए, अब बस् आर्थिक आर्थिक आर्थिक । त्यो आर्थिक पनि पुँजीवादी । दलाल, नोकरशाही र आसेपासे पुँजीलाई बढाउने ढंगले ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई अनावश्यक विरोध गरेर काम गर्न दिइएन भन्ने गुनासो छ नि सत्तापक्षको ?
दुई तिहाई बहुमत छ, त्यसैले औंलो ठ्ड्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा हैन । यो त उहिले श्री ३ हरुले, श्री ५ हरुले भनेजस्तो कुरा भयो । श्री ५ लाई पनि औं खडा गर्ने ? श्री ३ लाई पनि औंलो ठड्याउने ? यस्तो पनि हुन्छ ?
दुई तिहाई होस्, कि तीन चौथाई होस्, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्‍यो । जसले भन्यो उनीहरुलाई धन्यवाद दिनुको साटो केपी ओलीले साढे २६ दिन निन्दा गरेर बसे । अनि फेरि उनका मान्छेहरु भन्छन्- वा केपी ओली कति उदार ? कति महान ? कति प्रजावत्सल !
प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो के सुन्ने गरिएको छ भने लोकतन्त्रकै लागि ५० वर्ष लडेको र १४ वर्ष जेल बसेको मान्छेलाई यसरी ‘अधिनायकवादी’को आरोप लगाउनै सुहाउँदैन…
हिजो म जेलमा बसेको थिएँ भन्दैमा यसरी गिरेर जान मिल्दैन । अहिले केपी ओली के गर्दै हुनुहुन्छ, यसको जाँच हुँदैछ अहिले । उहाँ जेल बसेको बेलाको मूल्यांकन गरिएको त होइन नि ।
जेलमा बसेको बेलाको मूल्यांकन गर्नुपरे त्यो पनि गरौंला । तर, अहिले सरकारमा गएर तपाईले के गर्नुभो ? तपाई घोषणापत्रमा किन अड्नुभएन ? तपाईले किन असारे बजेट छर्नुभो ? कसैले केपी ओलीले एक अर्ब खान असार बजेट बाँड्यो भन्यो भने तपाई के भन्नुहुन्छ ?
जेलका बसेका बेला उनलाई अरु बन्दीहरुले आफ्नो छाक काटेर दूध र अण्डा खुवाउनुपथ्र्यो, उनले किन यो नसोचेको ? जेल बस्नु, दुःख पाउनु ठूलो कुरा होइन । त्यति गरेर पनि मान्छे गलत बाटोमा लाग्न सक्छ । अहिले केपी ओलीले जे गरिरहेका छन्, यसलाई हेर्नुहोस् त ।
जस्तो- अहिलेकै उदाहरण हेर्नोस् न, यो इन्काउन्टर किन हुन्छ ? निशान खड्का अपहरणपछि त्यही राति मारिएछन् । प्रहरीले ती आरोपित अपहरणकारीलाई फेला पारेर उनीहरुकै सूचनाका आधारमा वालकको लास पनि निकाले ।
चश्मदीत डेरावालहरुको भनाइ अनुसार पुलिसले नै उनीहरुलाई भ्यानमा राखेर लग्यो र अलि पर लगेर गोली ठोकेर मार्‍यो । यो कसरी इन्काउन्टर हुन्छ ? यो सरासर गैरकानूनी हत्या हो । अनि डेमोक्रेसीमा गैर कानूनी हत्या गर्न पाइन्छ ?
हो, वालकलाई अपहरण गरेर मार्नु सोह्रै आना गलत हो ।
कानूनले दिन्थ्यो भने ती अपहरणकारीहरुलाई फाँसी नै दिँदा हुन्थ्यो । फाँसी नहुने भए आजीवन कारावास हुन्थ्यो । तर, ती मजदुरी गर्ने केटाहरुले पैसाको अभावमा कसैले उचालेर त्यसो गरेका थिए कि ? उनीहरुका पछाडि को थियो ? वा कुनै पुलिस अधिकारीले नै लगाएको थियो कि ? कुनै राजनीतिक नेताले पो गराएको थियो कि ?
उनीहरु बाँचेका भए त भन्न सक्थे नि । त्यसैले यो गैरकानुनी हत्या नै हो । अनि यो सरकारको गृहमन्त्रीले त्यसलाई डिफेन्ड गर्न हुन्छ ? यस्तो हो भने त भोलि कोही माथि पनि गैरकानूनी हत्या हुन सक्छ । इन्काउन्टरका नाममा कोही पनि मारिन सक्छ । डेमोक्रेसीमा यस्तो चल्दैन ।
केपी ओलीलाई हिजै मार्दिएको भए के हुन्थ्यो ? पञ्चायती सरकारलेसमेत त्यति त राख्यो नि । मोहनचन्द्र र केपी ओलीलाई गौरमा माधव नेपालले मधेसी जनताको घरमा राखेको, बेलुका- बेलुका भलिबल खेल्न निस्किँदाखेरि मधेसी गाउँमा दुईजना पहाडे कसरी आए भनेर खोज्दै जाँदा उनीहरु समातिए ।
उनीहरुलाई समातेर प्रहरीले कुनामा लगेर ड्याङ्ग-ड्याङ्ग मार्दिएको भए के हुन्थ्यो ? जबकि त्यसबेलाको निरंकुश भन्ने सरकारले केपी ओलीलाई फेक इन्काउण्टर गरेन । सुखानीका शहीदहरु र नख्खुका कांग्रेसका लडाकाहरुलाई फेक इन्काण्टर गरियो । अनि यिनले चाहिँ अहिले फेक इन्काउन्टर गर्ने ?
तर, ओलीजी प्रधानमन्त्री बनेको पनि त भर्खर ५ महिनामात्रै पुग्दैछ, अहिल्यै यति धेरै गाली गर्न मिल्छ र ?
यो त ४ वर्ष ७ महिनाको गाली त हैन नि । पाँचै महिनाको मात्रै गाली हो यो । ५ महिनाको मात्रै हो । ५ महिनामा यति गर्छन् भने अब ४ वर्ष ७ महिनामा कति गर्ने हुन् !
यसबाट सच्चिएर उनीहरुले आफूलाई ‘रेट्रोफिट’ गर्नुपर्‍यो । जनताको यति आलोचना भएपछि यिनीहरुले आफूलाई ‘रेट्रोफिट’ गर्न सक्छन् । मैले यो जे कुरो भनिरहेको छु, उनीहरु सुधि्रउन् भनेर भनेको । उनीहरु सुधि्रए भने मैले पनि समर्थन गरौंला ।
सुध्रिएलान् जस्तो लाग्छ ?
मान्छेले गल्ती गर्छ र सुधार्न पनि सक्छ । तर, अहिलेसम्म यिनीहरुको घोषणापत्र हेरुञ्जेल यिनीहरुले गल्ती सच्याउने छाँट देखिँदैन । उनीहरुको दस्तावेजमा लेखेकै कुराहरुको मनसाय हेर्दाखेरि उनीहरु राष्ट्रघाती बाटोमा जाने नै देखिन्छ ।
यिनीहरुले संघीयताका नाममा किन काहिँ सय प्रतिशत, त काहीँ पाँचसय प्रतिशत कर बढाए ? यसलाई केपी ओलीले किन नरोकेको ? त्यत्रो जेल बसेको मान्छेले !